ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်နေကြောင်း မြန်မာ အစိုးရကို စွပ်စွဲ
စစ်တွေမြို့၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိနေတဲ့ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်တွေကို သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က သက္ကယ်ပြင်ဘက် ကို ပြောင်းရွှေ့ပေးနေစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေအပေါ် အစိုးရမူဝါဒတွေ ချမှတ်ကန့်သတ်ထားတဲ့ အတွက် မြန်မာအစိုးရဟာ လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှု crime against humanity ကျူးလွန်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက် Fortify Rights အဖွဲ့က ဒီကနေ့ စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ "ဖိနှပ်ရေး မူဝါဒများ" လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ အခုလို စွပ်စွဲ လိုက်တာဖြစ်ပြီး မြန်မာအစိုးရဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက မွတ်စလင်တွေရဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်ရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ် ကန့်သတ် ထားတယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
သမ္မတရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ကတော့ အခုအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီစွပ်စွဲချက်တွေကို မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ လက်ခံစဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
"Fortify Rights အဖွဲ့ရဲ့ အရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အချက်တွေကိုလည်း ကျနော်တို့ လေ့လာဖူးပါတယ်၊ အဖွဲ့ဟာ တကယ်တန်းကျတော့ ဘင်္ဂါလီတွေအတွက် Lobby လုပ်ပေးဖို့သက်သက်ပဲ ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့မျိုးပါပဲ၊ သူတို့ရဲ့ကြေညာချက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစီရင်ခံစာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ရတဲ့သတင်းအချက် အလက်အားလုံးဟာ ဒီဘင်္ဂါလီတွေ ပြောတဲ့စကားကိုပဲ မူတည်ပြီးတော့ ရေးထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ ဒီအစီရင်ခံစာကလည်း အဲဒီအတိုင်းပါပဲ၊ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ရေးထားချက်တွေကို လက်မခံသလို၊ အကြံပြုချက်တွေကိုလည်း အလေးထားပြီး စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ပါဘူး"
ဒီအစီရင်ခံစာမှာ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေရဲ့ တစ်အိမ်ထောင် ကလေး ၂ ဦးသာ မွေးဖွားခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒ၊ အလိုဆန္ဒမပါဘဲ အတင်းအကြပ် ကလေးမွေးနှုန်းကန့်သတ်မှု၊ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကို ကန့်သတ်မှု၊ ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်မှုနဲ့ သွားလာနေထိုင်မှုကို စောင့်ကြည့်စိစစ်နေတာတွေကို အခန်းလိုက်ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီအစီရင်ခံစာမှာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၈ ခုနှစ် စစ်အစိုးရလက်ထက်အထိ ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး အမိန့်နဲ့ ပြန်တမ်း ၈ ခု ကို အထောက်အထားအဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ ပြဌာန်း ခဲ့တဲ့ ဒေသဆိုင်ရာအမိန့် ၄ ခုကိုတော့ လုံခြုံရေးအရ ပူးတွဲထည့်သွင်းမထားဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မတရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ကို RFA အဖွဲ့သူ ဒေါ်ခင်ခင်အိ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
အစိုးရနဲ့ အရပ်ဘက် ပူးပေါင်းဖို့ မန္တလေးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား
ရခိုင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွား
ရခိုင်မှာ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၃ဝဝ နီးပါးရှိနေ
အစိုးရတပ်နဲ့ တအာင်းတပ်တွေ တိုက်ပွဲပြင်းထန်
UNFAIR ACCUSATION FROM FOREIGN ASSOCIATIONS AND ORGANIZATIONS TO MYANMAR GOVERNMENT.
EVERY GOVERNMENT IN THIS ENTIRE WORLD MAKING RULES AND REGULATIONS AS NECESSARY TO THEIR COUNTRY SITUATIONS.
PLEASE SEE CLEARLY HOW USA,UK,EUROPEAN UNION,CHINA,RUSSIA,AUSTRALIA AND MUSLIM COUNTRIES (OIC) ETC..HAVE SIMILAR LAWS IN THEIR COUNTRIES AND WHY UNFAIRLY COMPLAINING MYANMAR?
WHY WORLD ORGANIZATIONS ARE CLOSING THEIR EYES AND EARS AND TRYING TO GIVE PRESSURE TO MYANMAR REGARDING BENGALI.
PLEASE THINK, STUDY AND CLEARLY SEE WHERE THOSE BENGALIS COME FROM?
PLEASE SEE THE REAL ROOT CAUSES OF THIS BENGALI PROBLEM.
CAN YOU ALL GUYS LIKE TO HELP AND SOLVE THE PROBLEM INSTEAD OF UNFAIRLY BLAME TO MYANMAR.
PLEASE DO NOT UNFAIRLY ACCUSE MYANMAR
NO OR LESS HUMAN RIGHTS,
NO OR LESS DEMOCRACY,
NO OR LESS FREEDOM OF WORSHIP,
NO OR LESS FREEDOM OF PRESS ETC...
Mar 18, 2014 03:24 PM
RFA အဖွဲ့ ရဲ့ မေးမြန်းချက်မှာ စောဒက တက်စရာပါနေတယ်။ ဘင်္ဂလာဒေရှ့်နယ်စပ်က ဘင်္ဂလီတွေ မြန်မာဘက်ကို ဝင်နေတယ်လို့ ပြောပြီး မေးခဲ့တာ သဘာဝမကျဘူး။ ဘင်္ဂလီလူမျိုး ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များနေ့ စဉ်အဆက်မပြတ်ဝင် လာနေကြတဲ့ဟာကို ဘင်္ဂလာဒေရ်ှမှ အိစ္စလာမ်ဘာသာဝင် များ မြန်မာဘက်ကို ဝင် လာသလို ထင်ယောင် ထင် မှားဖြစ်အောင် မေးမြန်းခဲ့ တရားမမျှတပါဘူး။
Mar 02, 2014 10:20 PM
မွတ်စလင် များရေးပို့ သော comment များ ဘာကြောင့် မတင်ပေးတာလဲ။
Feb 26, 2014 05:50 PM